Ihe niile dị na nyocha enweghị ike ịma mma, ọ bụ ezie? Agbanyeghị na ngwa ahụ gbara ọsọ (ọ mere n'ezie - enweghị m nsogbu ọ bụla), echere m na enwere ohere buru ibu maka mmelite na ọdịdị nke ngwa ahụ. IMHO, Web 2.0 abụghị naanị ihe ihu Ajax, ọ bụkwa ihe dị mfe ma dịkwa nfe iji.
M ga-adụ ọdụ ihu okwu siri ike karịa nke nhọrọ nhazi nke ugbu a… na-enye ndị mmadụ ohere ịgbanwe ihe niile kama ị ga - agbanwe naanị, font-size na ibe agba Web 2.0 bụ maka ịkọwapụta onwe gị - nke a bụ ihe na-eme ka netwọkụ mmekọrịta ndị ọzọ ewu ewu. Nakwa, ụfọdụ mpaghara ntinye ego jupụtara ma ọ bụghị ihe nchọgharị. Dịka ọmụmaatụ font na ịkpụzi agba adịghị enye m ọrụ n'ụzọ ziri ezi: